ထိပ်ပြောင်ခြင်းသည် အမျိုးသားများတွင် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင် ချေကို မြင့်တက်စေသည်။ - Hello Sayarwon
ထိပ်ပြောင်သော အမျိုးသားများသည် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင် ချေ ပိုပြီးမြင့်သည်ဟု သုတေသနအသစ်တစ်ခုက ဆိုသည်။ ကံကောင်းသည်မှာ ၎င်းသည် ခေါင်း၏ ထိပ်ပိုင်းတွင် ပြောင်ခြင်းကိုသာ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ နဖူး ဆံပင်စပ်တွင် ပြောင်ခြင်း သည် ဖြစ်နိုင်ချေ မမြင့်ပါ။
ငယ်ရွယ်သူများသည် ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုမြင့်သည်။
အမျိုးသားများတွင် ထိပ်ပြောင်ခြင်းနှင့် နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းရောဂါတို့အပေါ် လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို လေ့လာမှုများအနက် ၃ခုသည် ထိပ်ပြောင်သော အမျိုးသား များ၏ ကျန်းမာရေးကို အနည်းဆုံး ၁၁ နှစ်ကြာ စောင့်ကြည့် ခဲ့သည်။ ထိပ်ပြောင်သော အမျိုးသားများသည် ဆံပင်ပုံမှန်ရှိ သူများထက် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ ၃၂ ရာနှုန်း မြင့်တက်သည်ကို တွေ့ရသည်။
အသက် ၅၅-၆၀ အောက် အသက်အုပ်စုတွင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော တွေ့ရှိမှု တစ်ခု တွေ့ခဲ့သည်။ အလွန်ထိပ်ပြောင်နေသော အမျိုးသား များသည် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ ၄၄ ရာနှုန်း မြင့်တက်သည်ဟူသော တွေ့ရှိချက် ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် ထိပ်ပြောင်သော အမျိုးသားများသည် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ ၇၀ ရာနှုန်းမြင့်တက်သည်။ ပို၍ငယ်သော အသက် အုပ်စုတွင် ၈၄ ရာနှုန်း မြင့်တက်သည်။
ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ထိပ်ပြောင်ခြင်းကြား ဆက်စပ်မှု
လူတစ်ယောက် ဘယ်လောက် ထိပ်ပြောင်သလဲသည် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ဆက်စပ်သည်ဟု သုတေသန ပညာရှင်များက ယုံကြည်ထားသည်။ သို့သော် လည်း ထိပ်ပြောင်ခြင်းသည် ဦးခေါင်း၏ ထိပ်တွင်ဖြစ်မှသာ မှန်ကန်ပါသည်။ အလွန်အမင်း ထိပ်ပြောင်ပါက နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ ၄၈ ရာနှုန်းရှိပြီး အတော်အသင့် ထိပ်ပြောင်ခြင်း သည် ၃၆ ရာနှုန်းရှိသည်။ အနည်းငယ် ထိပ်ပြောင်ခြင်းသည် ၁၈ ရာနှုန်းသာ ရှိသည်။ နဖူး ဆံပင်စပ်တွင် ပြောင်ပါက သိသာသော ကွာခြားမှုမတွေ့ရပါ။
ဤဆက်သွယ်မှုနောက်ကွယ်ရှိ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ။
ထိပ်ပြောင်ခြင်းသည် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ဘယ်လို ဆက်စပ်သလဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး သီအိုရီများစွာ ရှိသည်။ ထိပ်ပြောင်ခြင်းသည် နာတာရှည် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ကျား ဟော်မုန်းကို အလွန်တုံ့ပြန်ခြင်း သို့မဟုတ် အင်ဆူလင် ခုခံခြင်း ( ဆီးချိုသွေးချို ဖြစ်နိုင်) ၏ သတိပေးသော လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သုတေသနပညာရှင်များက ဆိုသည်။ ၎င်းတို့ အားလုံးသည် နှလုံးရောဂါကို ဖြစ်စေသည်။
ထိပ်ပြောင်ခြင်းသည် အမျိုးသားများကြားတွင် စိုးရိမ်စရာ တစ်ခုဖြစ်ပါသလား။
အမှန်တကယ်တော့ ထိပ်ပြောင်ခြင်းသည် ခါးတိုင်း လောက် စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ နှလုံးရောဂါနှင့် ထိပ်ပြောင်ခြင်း၏ ဆက်နွယ်မှုကို သက်သေလုံလောက်စွာ မပြနိုင်သောကြောင့် မယုံကြည်ဘဲ နေခြင်းသည် ကောင်းသည်။ သင်သည် ထိပ်ပြောင်ပါက နှလုံးရောဂါ ရနိုင်ချေ ပိုမြင့်သည်။ သို့သော် သင် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ကိုဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ဆက်နွယ်မှု သည် ယေဘုယျအချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိပ်ပြောင် သော အမျိုးသားများသည် တွေ့ရှိချက်ကြောင့် ထိတ်လန့် မသွားသင့်ပါ။ သို့သော် အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်သော အမျိုးသားတွင် နှလုံးနှင့်သွေးကြောရောဂါများအတွက် အနည်းငယ် ပိုပြီး ဂရုစိုက် စစ်ဆေးသင့်သည်။
Baldness Linked To Higher Risk Of Coronary Heart Disease. http://www.medicalnewstoday.com/articles/258601.php. Accessed April 19, 2017.
Male baldness linked to risk of coronary heart disease, research claims. https://www.theguardian.com/society/2013/apr/03/bald-men-heart-problems-report. Accessed April 19, 2017.
Male Baldness Linked To Heart Attack Risk (STUDY). http://www.huffingtonpost.com/2013/04/04/male-baldness-heart-attack-risk_n_3014460.html. Accessed April 19, 2017.